Home / sehatra / PC / MT4 ho an'ny PC
MetaTrader 4 dia iray amin'ireo sehatra fifanakalozana ara-toekarena malaza indrindra manerana izao tontolo izao ankehitriny. Ny fitaovana rehetra ilaina sy ny fitaovam-pihariana ilaina dia ahafahan'ireo mpivarotra hanao fikarohana sy fanadihadiana, miditra sy mivoaka ny varotra ary ampiasainy koa ny rindrambaiko fanamoriana varotra (Expert Advisors or EA's). Tsy faly amin'ny EA ara-barotra misy? Ny MetaTrader dia mampiasa ny mozikany amin'ny programa MQL4, izay ahafahanao mandrindra ny robots ho an'ny varotra ataonao.
Ny rindrambaiko MetaTrader 4 Broker dia manolotra karazana fitaovana famakafakana mahavariana. Fe-potoana sivy no azo ampiasaina amin'ny fitaovana ara-bola tsirairay. Ireo dia manome fandalinana amin'ny antsipiriany momba ny dinamika nalaina. Tranombokim-borona namboarina misy mari-pamantarana sy fitaovana maherin'ny 50 mandrindra ny fizotran'ny fandalinana, ahafahan'ny mpivarotra mamantatra ny fironana, mamaritra ny endrika tsena isan-karazany, mamaritra ny teboka fidirana sy fivoahana, manonta tabilao misy fitaovana ary manao ny fanadihadiana "an-taratasy" azy manokana.
MetaTrader 4 dia mirakitra ny sehatra fifanakalozan-kevitra rehetra ilaina amin'ny mpandraharaha ankehitriny. Ny baikon'ny tsena, ny fiatoana sy ny fijanonana amin'ny baolina, ny fijanonan'ny fijanonana - dia mitovy daholo eo amin'ny rantsan-tongotra miaraka amin'ny MT4.
Ny tranonkala dia mamela ny baiko omena amin'ny fomba isan-karazany, anisan'izany ny varotra mivantana avy amin'ny charts. Ny sarintan-tsidim-baovaon-tsindrim-peo dia fomba tena ilaina mba hamaritana ny fidirana amin'ny fidirana sy ny fivoahana.
MetaTrader 4 dia ahitana fampandrenesana ara-barotra, fitaovana ampiasaina hanampiana anao hanara-maso ny tontolo ara-barotra sy ny fivarotana mora indrindra. Miaraka amin'ny fitaovam-pivarotana FXCC MT4 eo an-tananao, ny angovo rehetra azonao atao dia ampidirina amin'ny fametrahana ny paikady ara-barotra, amin'ny fiarovana amin'ny fahalalana fa ny fitaovan'ny fitaovana ao MT4 dia misy anao hamerina anao.
Tahaka ny trosa ara-bola rehetra, ny fiarovana ny fampahalalam-baovao dia manan-danja lehibe. Ny rindrambaiko Broker FXCC MetaTrader 4 Broker dia mandefa ny vaovao avy any amin'ireo tsena amin'ny fifandraisana miafina 128-bit. Izany no hiantohana ny fiarovana ny varotra rehetra. Ankoatr'izany, ny FXCC dia manome ny fahafahana mampiasa ireo algorithm fampitomboana ny fiarovana ny Key Cryptography. Ny fampahalalana azo antoka amin'io lamaody io dia tsy azo atao mihitsy ny mihazakazaka ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny MetaTrader 4 dia misy lahasa mora takatra mora foana, noho izany dia minitra vitsy fotsiny vao mahazo aina amin'ny safidy samihafa azonao atao amin'ny maha mpivarotra anao. Ny sehatra dia manana fiasa "Fanampiana" namboarina mba hahafahanao mahazo valiny amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra avy ao anatin'ny lozisialy mihitsy, mba hahafahanao mifantoka amin'ireo zava-dehibe - varotra.
Na rahoviana na rahoviana, raha tsy afaka mamaly ny fanontanianao ny tolotra MT4, ny mpampiasa mpanohana FXCC dia afaka.
MetaQuotes amin'ny fiteny4 (MQL4)
Ny MetaTrader 4 sehatra fifanakalozana dia tonga amin'ny tenim-paritra manokana ho an'ny paikady fampandehanana amin'ny programa. MQL4 dia ahafahanao mamorona ny EA (Expert Advisor) anao ary manamboatra ny varotra mifototra amin'ny paikadinao manokana. Amin'ny fampiasana MQL4 dia afaka manangana ny tranokalanao manokana amin'ny endriky ny endriky ny endriny, ny rakitra ary ny antonony. Raha jerena ny lazan'ny tranonkala Forex MetaTrader 4 Broker, dia maro ireo forums sy ny vondrom-piarahamonina an-tserasera no nipoitra, izay ahafahan'ny mpampiasa mifandray sy mifanakalo torohevitra sy paikady mba hahazoana ny ankamaroan'ny fiteny programa MQL4 sy MetaTrader 4 amin'ny ankapobeny.
Mpanolotsaina manam-pahaizana dia rafitra ara-barotra mekanika (MTS) mifandray amin'ny sehatra sasantsasany. Ireo mpanolotsaina dia tsy afaka mampahafantatra anao fotsiny ny fahafahana miditra amin'ny raharaham-barotra, fa koa manao fifanarahana amin'ny kaonty momba ny varotra ary manitsy azy ireo amin'ny sehatra varotra. Tahaka ny ankamaroan'ny fivarotana varotra, ny MetaTrader 4 Trading terminal dia manohana ny paikady fitiliana amin'ny antontan-kevitra ara-tantara miaraka amin'ny fampisehoana an-tsehatry ny fidiran'ny varotra sy ny fivoahana.
Endri-tsoratra manokana dia ny MetaTrader 4 dia maka endriky ny teknika. Ireo endriky ny endriky ny endriky ny famoronana endriky ny zavatra hafa ankoatra ireo efa efa tafiditra ao amin'ny terminal MetaTrader 4. Tahaka ireo endriky ny fanorenana izay mivoaka mialoha ny MT4, ny fikendren'ny mpampiasa dia mikendry ny fanadihadiana ara-teknika ary tsy afaka manokatra na manakatona ny varotra automatique.
soratra dia fandaharan'asam-panofanana ho an'ny famonoana ny hetsika sasany. Tsy toy ny Mpanolo-tsaina Mpanentana, ny scripts dia tsy mihazakazaka mihodina ary tsy manana fahazoana mampiasa endri-tsoratra.
trano famakiam-boky dia ireo databona fonosana mpampiasa izay misy tahirin-tsoriaka matetika ampiasaina ao amin'ny MQL4 code. Rehefa mandamina programa manokana na EA ao amin'ny MQL4, dia afaka misintona ireo tranokala famandrihana ny mpampiasa ary manampy ireo asa voatana ireo any amin'ny robot vaovao.